Emulsifying mixer, Machine feno, mifangaro Tank - Maxwell
Mihoatra ny 10 taona mahery
Mahay mandanjalanja ary azo antoka
Varotra tsara sy mahomby aorian'izay
MANOTSY NY FAMPISORANA TSARA INDRINDRA
Wuxi Maxwell Automation Technology Co, Ltd dia mamatsy vola dolara iray tapitrisa dolara. Ao amin'ny Zone-Indostrian'ny Indostrian'ny teknolojia wuxi izahay. Miorina amin'ny fikarakarana kosmetika, fanafody, sakafo, indostria simika ary fampidirana miaraka amin'ny fampandrosoana, famokarana ary varotra isika.
(Ny vokatra lehibe anay; milina fanodinana ny banga, milina famenoana, milina fametahana, fihetsiketsehana stainless, mpanentana planeta, crushers, fanentanana hidradrama, sns ...)
Wuxi dia tanàna tsara tarehy, akaikin'ny tanàna Shanghai - tanàna lehibe indrindra any Shina. Noho izany dia mety amin'ny fandefasana entana mankany amin'izao tontolo izao avy amin'ny seranan'i shanghai.
MAKAZOANA VOKAUMANA VACUUM
Io dia milina famenoana tsotra sy mora sy lafo.
FAMPITANANA FOTSANGANA AUTO FAMPIASANA ARAKA MAIMPIANA
Izahay dia mamakafaka ny fanisiana tombo-kase, ny fantsona sy ny famenoana feno milina famenoana sy milina famaranana.
Miorina amin'ny fangaro mivaingana, biraon'ny fifangaroana mivaingana, ary paompy betonta ary milina fananganana hafa.
misoratra anarana amin'ny kaonty